အတွေးအမြင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 16
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) - ပလုံ ပလုံ ပလွတ်
ကိုသန်းလွင် - မိဂဒါဝုန်
ကိုသန်းလွင် - ဖီလိုဆိုဖါ
ဇော်အောင် (မုံရွာ) နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၂ အောက်ပါစာစုမှာ “ဤကမ္ဘာကို တရုတ်တို့ကြီးစိုးသည့်အခါဝယ်” ဘာသာပြန်စာအုပ် အခန်း (၁၀) မှ ထုတ်နှုတ်တင်ပြ ထားချက်ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်တို့၏ မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်ကား အာဖရိကသို့ ထိုးဖောက်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်တို့အနေဖြင့်...
ကံထွန်းသစ် နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ (၁) “ကာယကံစင်ကြယ်သူ၊ ဝစီကံစင်ကြယ်သူ၊ မနောကံစင်ကြယ်သူကို သူတော်စင် သူတော်ကောင်းဟု ခေါ်သည် “ မင်နီဖြင့် အောက်လိုင်းတား ထားသော ထိုစာပိုဒ်လေးသည် မနေ့ကကြည့်ခဲ့သော လယ်တီဆရာ တော်ဘုရား၏...
အရှင်ဉာဏိကာဘိဝံသ (ကာလီဖုိုးနီးယားတက္တသုိုလ်) နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂ အဒ္ဓါ ပုထုဇ္ဖနာ သေက္ခာ၊ ခီဏာသဝါ ဂတဒ္ဓိနော = ပုထုဇဉ်နဲ့ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေက ခရီးသွားတွေ၊ ရဟန္တာများကတော့ ခရီးနားများပေါ့။ စာတစ်ပုဒ်ရေးချင်နေတာ။ ဘာအကြောင်းရေးနေချင်မှန်း တိတိကျကျ...
ကျော်ဟုန်း နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ ခုထိ ပြတ်သားစွာ အဖြေမသိရသေးတဲ့ လက်ပံတန်းတောင်လူထုအစည်းအဝေးကြီးရဲ့ ရလဒ်ကို တွေးမိပါတယ်။ အထက်ဗမာပြည်မုံရွာခရိုင်တွင်းက လက်ပံတန်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့အတွေးတ ခုပါ။ ဒေသခံတွေ ဆန္ဒပြရခြင်း ဇစ်မြစ်ကို လေ့လာသုံးသတ်ဖို့လိုလာပြီလို့ထင်လို့ပါ။ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းကို...
မြန်မာစံတော်ချိန်၊ မြန်မာ Attitude ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည် အလည်ဖြစ်စေ၊ ရင်းနှီးမြှတ်နှံ၊ စီးပွားလုပ်တာဖြစ်စေ၊ မြန်မာလူမျိုး၊ နိုင်ငံတကာလူမျိုးတွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာပဲ သယ်သွားကြတယ်။ စင်ကာပူမှာ ၂၀နှစ်လောက် နေလာခဲ့တဲ့...
လူနဲ့ အပြောင်းအလဲ နေဘုန်းလတ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ “အားလုံးဆီက တစ်ခုခု တောင်းဆိုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ … အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကို ဖန်တီးဆောင်ယူကြသူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အောင်စိတ်မျိုးမွေးပြီး … တိုင်းပြည်အတွက် အပြောင်းအလဲသစ်တွေ၊ အပြောင်းအလဲကောင်းတွေကို...
ငြိမ်းချမ်းအေး အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဒီနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုဒ်မှာ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းတခု တွေ့ရတယ်။ အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင် ဘီလျံနာသူဌေးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ထိတ်တန်း ဘောလုံးကလပ် အေစီမီလန်အသင်း ပိုင်ရှင် ဘာလူစကိုနီ တယောက် သူ့သက်တမ်းတလျှောက် အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှု၊ အသက်မပြည့်သူနဲ့...
စနစ်ပြောင်းလာပေမဲ့ မူမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ ပညာရေး ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU)၊ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် ဆန်းသစ်နိုင်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာမျက်နှာပန်းလှနေ ချိန်ဝယ်…။ အခွင့်လမ်းတွေ၊ အခွင့်ရေးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တန်းစီဝင်လာနေခြင်းပါ။ သို့သော်...
အရှင်ပညာနန္ဒ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ၁၉၈၀ နှစ်များအလွန် မန္တလေးမှာနေစဉ်အခါက မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် (တိုက်ဟောင်း) နားမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာတယောက်ကို တွေ့ဘူးတယ်။ သူ့အသက်က (၃၀) ၀န်းကျင်ခန့်၊ ဆိုက်ကားဆရာရဲ့ဝတ်စားပြင်ဆင်ပုံက အများနဲ့မတူ တမူထုးခြားတယ်ဆိုရမလားဘဲ။...
ဒီးဒိုး အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂ သမ္မတကြီးကပြောတယ်။ အခြေခံဥပဒေအရ၊ လွှတ်တော်တွေရော ပြည်သူတွေရောထောက်ခံရင် အမေစုကို သမ္မတနေရာလွဲပေးမည်။ အ မေစုကလည်းပြောပါတယ်။ အခြေခံဥပဒအရ လွတ်တော်ထဲမှာရော ပြည်သူတွေဆန္ဒအရ သမ္မတနေရာကို ယူပေးပါဆိုလျှင် ယူပေးနိုင်၊ ယူ...
ဒေါက်တာ ဓမ္မပိယ (ITBMU) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို အာစီယံနိုင်ငံများ၏ စံချိန်၊ စံနှုန်းများနှင့်ညီအောင် ၂၀၁၅ နှစ်အမှီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ တက်စုံရွက်စုံဖွင့်ပြီး နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်းများ အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ … ပြုပြင်ပြောင်းလွဲရေးမှာ...
နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ နမော ဗုဒ္ဓါယ သိဒ္ဓံ …………………………. အရှင်နန္ဒဝံသ (ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ၊ Amarillo,Texas, U.S.A) စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ● အမာရီလိုဆိုတာ...
ကြိုဆိုပါသည် … သို့သော် ….
ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU) စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့နိုင်ငံတော်သည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသို့ အသွင်ကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့ … ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ မူဝါဒဖြစ်တဲ့ “လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်” တို့ “လွတ်လပ်စွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်” တို့ “လွတ်လပ်စွာ...
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမြို့ကြီးများရေကြီးစဉ် ဒီဓါတ်ပုံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ကလေးများဟာ ၀၀ဖြိုးဖြိုးလေး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အဟာရဓါတ် ပြန်လည်တိုးတက်လာပြီလို့ မှတ်ယူရပါတယ်။...
Hay-la Wah-la Attitude ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ဗျာ …
ဇော်အောင် စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ● နိဒါန်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည့် AFC U-22 ချန်ပီယံရှစ် ခြေစစ်ပွဲ (Group-G) ပွဲစဉ်များတွင် ပရိသတ်နှင့် မြန်မာဘော်လုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ဖြစ်ပျက်ပုံများ၊ အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ၅...
ဥာဏ်ဦးမောင်၊ စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ မြက်ခင်းတစ်ခင်းဟာ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နုိုင်တယ်။ ဒီလုိုဆုိုလျင်တော့ ကမ္ဘာကျော် ဘောသုံးသမားတွေအတွက် ကျင်လည်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့။ နောက်ပြီး မြက်ခင်းတစ်ခု ဟာ ဂေါ့ဖ်ကွင်းတစ်ကွင်းလည်း ဖြစ်နုိုင်တာပေါ့။ ဒါဆုိုလျင်တော့ လူဂုဏ်ထံအထက်တန်းလွှာ များရဲ့...
အချစ်ကုထုံး ကံထွန်းသစ်၊ သြဂုတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂ ” ပီယတော ဇာယတေသောကော၊ ပီယတော ဇာယတေ ဘယံ၊ ပီယတော ဝိပ္ပမုတ္တဿ၊ နတ္ထိသောကော ကုတော ဘယေ “ (ဓမ္မပဒ) ...